Chaicho-Nguva Mhinduro Kugadziridza Yako Email Kubatanidzwa | Martech Zone
Chaicho-Nguva Mhinduro Kugadziridza Yako Email Engagement
NeChishanu, Kurume 6, 2015 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vari vatengi kuwana izvo zvavanoda kubva kuemail kutaurirana? Vashambadzi vari kushaya mikana yekuita mishandirapamwe yeemail yakakosha, ine chinangwa uye inobata? Nharembozha iko kutsvoda kwerufu kune vatengesi veemail?
Maererano nezvino tsvagurudzo inotsigirwa naLiveclicker uye inoitiswa neThe Relevancy Group, vatengi vari kuratidza kusagutsikana kwavo nemaemail ane chekuita nekutengesa anowanikwa pane nhare mbozha. Kuongororwa kweanopfuura chiuru kunoratidza kuti vashambadziri vanogona kunge vachirasikirwa nevatengi vanobata zvizere vachishandisa email nhare.
Makumi mana nevana muzana evatengi vakaongororwa vakati havafarire kugamuchira mameseji ekutengesa emaimeri pafoni dzavo nekuti vanogamuchira maemail akawandisa, kazhinji. Makumi matatu nemanomwe muzana vakati meseji idzi dzaive dzisina basa, uye makumi matatu nezviviri vakati meseji idzi idiki kwazvo kuti dzigone kutaurirana nharembozha.
Neinenge hafu (makumi maviri neshanu muzana) yevatengi vanoshandisa nharembozha yavo kuyedza inbox yavo kuti vasarudze zvekuverenga kana kusaverenga gare gare uye chinenge chetatu vachishandisa sechigadzirwa chavo chekutanga, zvinoita sekunge vashambadzi vangave nedambudziko hombe.
Zviri pachena kubva kutsvagurudzo yedu kuti vatengi vanotarisira zvakawanda kubva kuvashambadzi uye kuti kugadzirisa nharembozha kutumira mameseji ega hakuna kukwana kuwana mukana wemakwikwi. Kugamuchira zano rinosanganisira chaiyo-nguva yekumisikidza matekisheni senge ekuverengera nguva kana kurarama maficha maficha, kune mamwe maitiro epamberi, senge mamiriro ekugadzirisa uye kurarama zviri mukati mewebhu, zvinogona kugadzira ruzivo rwakasimba uye kutyaira kubatikana zvisinei chishandiso icho mutengi anoshandisa email, asi kunyanya kune vakawanda-tasking vatengi vari kuenda. David Daniels, Iyo Inoburitsa Boka
Asi zvinoita sekunge vashambadziri havasi kusvetukira pane bandwagon kuti vashandise aya marudzi ezvishandiso. Muchikamu chechipiri cheongororo, iyo yaibvunza mabhizimusi mazana maviri nemakumi mashanu nevashambadziri, The Relevancy Group rakawana vashambadziri vazhinji vasiri kushandisa nzira dzekutarisa dzinoita kuti mameseji eemail akodzerane nemamiriro emugashiri - kunyangwe hazvo vachishandisa email, asi chinonyanya kukosha kune vakawanda-tasking vatengi vari kuenda.
Chete 16-37 muzana yevatengesi yakataura kuti ivo vaigadzira zvemukati zvinoenderana ne nzvimbo, nguva yenguva, mamiriro okunze, mudziyo wechigadzirwa, nhamba dzekuverenga or kuvimbika mubairo zviyero. Icho chikonzero cheichi chinoratidzika kunge chiri kuti vari kunetswa nehurombo hwekuwana dhata uye chirongwa chekubatanidza zvirongwa.
Tichifunga huwandu hwekutengesa email uye kuwanda kwemeseji vatengi vari kumisikidza, vashambadzi vanofanirwa kurwira kuwana dhata iro rinogona kubatanidzwa nemamiriro ezvinhu mune chaiyo-nguva nzira kuti vaone kuwedzerwa kwemari uye kugona kuwana. Vashandisi veMafoni vane hanya neshambadziro yemeseji, saka kushandisa matekiniki anotendera vashambadziri kuti varambe varipo pasina kuwedzera frequency kwakakosha.
Asi vashambadziri havafanirwe kutya, sezvo paine dzimwe nzira dziri nyore dzekutanga kushandisa chaiyo-nguva yekumisikidza matekiniki ekuita eemail mishandirapamwe inobata uye kufambira mberi nekuwedzera kune mamwe epamusoro ekushandisa.
Semuenzaniso, vachishandisa chaiyo-nguva tekinoroji, vashambadziri vanogona kushandura zvine simba dhizaini-yekurodha bhatani mabhatani muemail zvichibva pachigadzirwa chiri kushandiswa sezvo meseji iri kuverengwa. Saizvozvowo, vatengesi vanogona kugadzirisa zvigadzirwa zvavo kuti varatidze kana kuti vasaratidze zvinyorwa zvichibva pane foni inoshandiswa.
Pazasi pane akasiyana mazinga ehunyanzvi uye mienzaniso yeiyo chaiyo-nguva matekiniki vatengesi vanogona kuita:
Novice - Countdown nguva, rarama magariro mafidha
zvenguva - Context kusarudzika, chaiyo-nguva A / B kuyedza uye yakadzamidzirwa vhidhiyo
enderera - Rarama zvewebhu zvemukati, zvakasarudzika nguva dzakatarwa
Nyanzvi: Yechokwadi-nguva yekuita munhu uchishandisa akasiyana dhatisheni sosi
Pazasi pechikwiriso chemanera, matekiniki akadai se kudyidzana kwevanhu uye kuverenga nguva inogona kuita zvine mutsindo mune chaiyo mamiriro, ichiratidza 15 kusvika ingangoita 70 muzana inowedzera mukukanda-kuburikidza nemitengo kana ichienzaniswa nemaemail asingasanganise zvinhu zvakadaro.
Chirevo ichi kushevedzera-kune-chiito kune vashambadziri kuti vapindure zvinobudirira kune zvinodiwa nevatengi kana njodzi kuve isingachashandi. Kuteedzera chaiwo-nguva mhinduro zvinoenderana neyako yakasarudzika bhizinesi mamiriro uye zviwanikwa zvinogona kushandura email kushambadzira mishandirapamwe uye nekukurumidza kukanganisa iyo yepazasi mutsara. Kuti udzidze zvakawanda, verenga White Pepa: Kuongorora mabhenefiti Echokwadi-Nguva Email - Kutyaira Kushambadzira Kubudirira.
Nezve RealTime Email neLiveClicker
Iyi posvo yakanyorwa nerubatsiro rwe RealTime Email na Liveclicker, chikuva chekutumira chaiyo-nguva yezvigadziriso mhinduro, chaiyo-nguva yekuyedza, chaiyo-nguva yekuvavarira uye analytics.
Tags: Chirevo chemunhuKuverenga nguvaeemail inovhurayakadzamidzirwa vhidhiyorarama magariro feedsRarama zvewebhu zvemukatiliveclickermazuva akasarudzika-Chaicho nguvachaiyo-nguva A / B kuyedzachaiyo-nguva emailYechokwadi-nguva yekuita munhunguva chaiyoemail chaiyo
Mashandisiro Aunoita Attribution Ongororo yeiyo Yakasimba Kushambadzira Insight